Hoento amin’ny raikipohy malagasy | NewsMada
Hoento amin’ny raikipohy malagasy
Taty aorian’ny taona 1975, nivoaka ny ankamaroan’ireo voambolana malagasy vaovao fampiasa eo amin’ny siansa. Anisan’ireny ny « raikipohy » izay mety ho azo azavaina tsotsotra amin’ny hoe : « lalana izorana hamaha olana iray na roa na maromaro ». Manana olana goavana ny Malagasy sy i Madagasikara. Samy niezaka namaha azy ireny ny mpitondra nifandimby teo. Tahaka izany ihany koa ny olona tsirairay. Ny fikambanana sy ny sampandraharaha isan-tsokajiny, sns. Samy nampiasa ny raikipohiny fa toa tsy nifanitsy tamin’ny aretina mihitsy ny fanafody… Ka tsy aleo ve mampiasa ny raikipohy malagasy amin’izay ?
Indreto misy raikipohy ahafahana mampandroso haingana ny fiarahamonina malagasy sy ny sehatra rehetra ao aminy ary i Madagasikara manontolo : « Ny fanahy no maha olona » (Ny fanahy no olona), « Akanga maro tsy vakin’amboa », « Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Zanahary an-tampon’ny loha », « Trano atsimo sy avaratra, izay tsy mahalen-kialofana », « Raha nanao no tsy nambinina, ampisambory fa havana ory », sns.
… Fa inona no tsy iainana azy ireo ? Maninona ireo no zary lasa raikipohy mipetraka any an-tsain’ny Malagasy fotsiny ihany fa tsy hampihariny amin’ny fiainana ? Satria efa nodontoana tamina raikipohy hafa sy tsy azy akory ny sainy. Raikipohy tsy mifanaraka velively amin’ny zava-misy marina eto Madagasikara. Raikipohy, hoentina mampanan-karena ny vahiny. Hoentina manefy tsikelikely ny sain’ny Malagasy hamadika ny fahalalana ho finoana. Raikipohy hoenti-mampisafotofoto ny fiainan’ny ankohonana malagasy ka nananan’ny zanaka fahasahiana haniratsiray sy hamingavinga ny raiamandreny.
Manana raikipohy azy sy sahaza azy ny Malagasy. Tsy norantovina avy any ivelany izy ireny fa nitrebona avy ao anatin’ny rindram-piarahamonina malagasy. Tsy tokony hiandrasana ireo mpitondra ny fampiharana sy ny iainana izany fa atomboka avy hatrany. Miainga avy any amin’ny olona tsirairay eo amin’ny sehatra misy azy. Izay mahalala, aoka hanoro !